Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0413 zom
Zoma 26 Apr.
Vakio ireto teny nalaina avy tamin’ny boky manaraka ireto ka diniho tsara ny fomba anampian’izy ireo antsika hahatakatra bebe kokoa ny hafatra ao amin’ny Amô. 1--4 sy ao amin’ny Obadia.
“Hatrany am-piandohan’ny fivavahana isiraelita no efa vatofehizoron’ny finoana hebreo sady fialofana amin’ny fotoan-tsarotra ihany koa ny finoana fa nofidin’Andriamanitra io firenena manokana io mba hanatanteraka ny iraka ampanaoviny. Tsapan’ireo mpaminany anefa fa vato nahatafintohina ny ankamaroan’ireo mpiara-belona taminy izany vatofehizoro izany; ary lasa fandosirana io. Tsy maintsy nampahatsiahy ny olona àry izy ireo [ireo mpaminany] fa tsy tokony ho diso fiheverana izy ireo ka hihevitra ny maha-vahoaka voafidy azy ho fiangaran’Andriamanitra tamin’ny fomba manokana na koa zo manafaka azy tsy hiharan’ny famaizana. Mifanohitra amin’izany aza fa ny maha-vahoaka voafidy azy dia nidika hoe vao mainka izy ireo hiharan’ny fitsaran’Andriamanitra sy ny famaizany rehefa misy tsy mety ataony....
“Moa ve ny nifidianana ny Isiraely midika fa izy dia izy irery ihany no heverin’Andriamanitra? Ny fanafahana avy tany amin’ny tany Egipta ve midika fa ny tantaran’ny Isiraely irery ihany no idiran’Andriamanitra an-tsehatra ary hadinony tanteraka kosa ny momba ny firenen-kafa?” — The Prophets, Abrahama J. Heschel, tt. 32, 33.
“Hivily lalana ny fanahy rehetra tsy manam-piarovana intsony, fa tsy afaka hitolona amin’ny fahotana, ka handeha araka ny nahiny sy ny filan-dratsy ao amin’ny fon’olombelona.
“Nanandratra ny feony hanohitra ny fampijaliana mihoa-pampana, ny tsy rariny mibaribary, ny haingo aman-dravaka tafahoatra sy adala izay nanjaka tamin’ny androny ny mpaminany. Naniny ny fanasan-dehibe sy ny fimamoana, ny filibana tamin’ny fahavetavetana mbamin’ny tsy fahalalana voky izy; kanefa dia asa very maina ny nanaovany fanoherana mafy tamin’ny vahoaka mpanompo sampy sy ny fampahafantarany ny fahotana nataony. ‘Halany izay mananatra eo am-bavahady, hoy ny nambaran’i Amôsa, ary ataony ho fahavetavetana izay miteny ny marina’.... ‘Mampahory ny marina sy mandray kolikoly hianareo ary mamadika ny malahelo eo am-bavahady’” — MM, tt. 237, 238.
Mora ny mampiseho toetra mahafinaritra amin’ny olona izay manan-katolotra anao. Ahoana kosa ny amin’ireo tra-pahoriana tsy mba afaka manome na inona na inona ho anao, fa izy ireo indray aza no mila ny fanampiana avy aminao? Inona no toe-tsaina tokony hasehontsika amin’ny olona toy izany? Inona no fihetsikao manoloana azy ireny?
Saintsaino ny amin’ireo fahalalana efa nomena antsika Advantista mitandrina ny andro fahafito. Kristianina maro no tsy mahalala na inona na inona mikasika ireo fitahiana avy amin’ny Sabata (mainka moa fa ny maha-zava-dehibe azy amin’ny andro farany); ny ankabeazan’ny olona dia mihevitra fa miakatra avy hatrany any an-danitra ny maty na mankany amin’ny fampijalijaliana any amin’ny afobe. Maro no tsy mino ny fitsanganan’ny tenan’i Jesôsy tamin’ny maty sady tsy mino fa tena ho avy fanindroany ara-bakiteny tokoa Izy. Inona ihany koa ireo fahamarinana lehibe hafa nomena antsika kanefa tsy fantatry ny ankamaroan’ny olona? Inona no andraikitra tsy misaraka amin’ny fananana ireo fahamarinana ireo?